खेमराज नेपाल | गृहपृष्ठ
Home सम्पादकीय खेमराज नेपाल
२००३ सालमा इलामको नाम्सालिङमा जन्मिएका खेमराज नेपालले ४१ वर्षअगाडि कलकत्ता विश्वविद्यालयबाट सोसल एन्थ्रोपोलोजीमा स्नातकोत्तर गरेका हुन् । २०३२ सालमा शाखा अधिकृतबाट सरकारी सेवा शुरू गरेका उनले सचिवसम्मको जिम्मेवारी सम्हालेपछि अवकाश लिएका हुन् । स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट सेवा शुरू गरेका नेपाल अवकाश लिँदा सोही मन्त्रालयमा सचिव थिए । सेवा अवधिभरिमा उनले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा २ वर्षसचिव र ४ वर्षयोजना आयोगमा सहसचिवको जिम्मेवारी पनि सम्हालेका थिए । २०६१ सालमा अवकाश लिएका नेपाल करीब ६ वर्षदेखि सुशासन अध्ययन प्रतिष्ठानमा कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् ।
स्थानीय निकायमा सुशासनको आवश्यकता
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा राज्यको ढाँचा र स्थानीय स्वायत्त शासनको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानमा पहिलोपल्ट स्थानीय स्वायत्त शासनको व्यवस्था हुँदा स्थानीय बासिन्दा ज्यादै खुशी भएका थिए, स्थानीय निकायहरुले गौरव महसूस गरेका थिए । आमनेपालीले जरातहदेखि नै बलियो लोकतन्त्रको परिकल्पना साकार हुने विश्वास लिएका थिए । ‘स्थानीय सरकार’ नामकरण गरिनुपर्छ भनेर जनताले जोड गरेका थिए । तथापि, स्थानीय स्वायत्त शासनको व्यवस्था हुँदा पनि लोकतन्त्रका आधारभूत तत्वहरु मौलिक हकको संरक्षण, विधिको शासन, प्रतिस्पर्धात्मक नेतृत्व, मानव अधिकारको संरक्षण, अल्पमतको कदर, अल्पसङ्ख्यक तथा निमुखा वर्गको उत्थान र समग्र विकास अनि स्रोत परिचालनमा जनताको अधिकार र सक्रिय सहभागिताको प्रत्याभूति हुन्छ भन्नेमा जनता विश्वस्त थिए । जुन सोच र आकाङ्क्षाका साथ अन्तरिम संविधानमा यो व्यवस्था गरियो, विगतको ५ वर्षमाई हेर्दा सरकारले त्यही अठोट लिएर सही कार्यान्वयन गर्न पटक्कै सकेन । अझ मौजुदा स्थानीय निकायको कामकारबाही गर्ने संयन्त्र र विधिलाई नियमन र अनुगमन गर्न नसक्दा हाल स्थानीय निकायहरु माउविनाका चल्ला भइरहेका छन् ।
विसं २०५९ मा स्थानीय निकायका निर्वाचित पदाधिकारीहरुको पदावधि समाप्त भएपछि तत्कालीन राजनीतिक अवस्था र विषम परिस्थितिलाई देखाएर सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न सकेन । स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएपछि सरकारले अस्थायी व्यवस्था गरी निजामती कर्मचारीहरुबाट स्थानीय निकाय सञ्चालन गर्ने जुन प्रयास गर्यो, त्यो व्यवस्था लोकतन्त्रअनुकूल थिएन । जब त्यो व्यवस्थाविरुद्ध जनआवाज उठयो अनि सरकारमा रहने दलहरुले अनुभव र जनाधारविनाका आफ्ना आसेपासे कार्यकर्ताहरुको भर्तीकेन्द्र जस्तो गरी ‘टीके’ जनप्रतिनिधिहरु मनोनयन गरेर स्थानीय निकायको सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरे । केन्द्रमा नै मन्त्रिपरिषद्को स्थायित्व नभएकाले त्यसको अनुचित फाइदा उठाउँदै स्थानीय निकायका टीके प्रतिनिधिहरु विधिको शासनभन्दा बितण्डाको शासनतर्फ उन्मुख हुन थाले । अर्को नवगठित सरकारले त्यसलाई खारेज गर्यो र पुन: निजामती कर्मचारीहरुकै काँधमा स्थानीय निकाय सञ्चालन गर्ने अभिभारा सुम्पियो । यो चाकाचुली दुई-तीनपटक चलिरहयो ।
त्यसबखत माओवादीहरु व्रि्रोही थिए, अहिले सत्तासाझेदार छन् । अब उनीहरुको आवाजलाई पनि स्थानीय निकायमा अटाउन आवश्यक भयो । त्यसका लागि वैधानिक संयन्त्रको खोजी भए तापनि अहिलेसम्म चित्त बुझदो राजनीतिक संयन्त्र बनाउन सकिएको छैन । अहिलेको अवस्थामा कर्मचारीको वैधानिक संयन्त्रलाई राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुको सुझाव र सहयोगमा काम गर्न सरकारले निर्देशन दियो तर वैधता दिएको छैन । यो व्यवस्थाले न त दलका प्रतिनिधिले जनता र सरकारप्रति उत्तरदायी भएर काम गरेका छन् न त कर्मचारी संयन्त्रलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न दिएर जनउत्तरदायी बनाइएको छ ।
यस्तो अन्योलको संस्थागत संरचनाबाट स्थानीय निकायको स्रोत साधन बढी दुरुपयोग भएको, बाँडचुड गरेर खाने प्रवृत्ति बढेको र अनियमितता बढी भएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनहरुले औंल्याएका छन् । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले रौतहटका स्थानीय निकायमा गरेको एउटा अनुगमनबाट के देखिएको छ भने जिल्लामा दलगत मत पाएका आधारमा धेरै मत प्राप्तवालाले स्थानीय बजेट त्यही अनुपातमा लिएको र आफ्नै कार्यकर्ताबाट काम गराउने पद्धतिको विकास भएको छ । यसले के सङ्केत गर्दछ भने सरकारले जति बेवास्ता गर्दै जान्छ, त्यति नै नयाँ छ्रि्रहरु बढ्दै जान्छन् ।
स्थानीय स्वायत्त शासन सुम्पुवा अधिकारबाट सञ्चालन नभई जनतालाई कानूनप्रदत्त हक दिलाएर उनीहरुको निर्णये सृजित दायित्वबाट उब्जिएका सम्पूर्ण क्रियाकलापहरु उनीहरुकै सहभागितामा सञ्चालन गरिने व्यवस्था हो । विसं २०५५ मा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन लागू गरेपछि स्थानीय स्तरमा महिलाको सहभागितामा वृद्धि, सहभागितात्मक विकास प्रक्रियाको अभ्यास, आधारभूत सूचना तथा तथ्याङ्क सङ्कलन, राजस्व तथा करमा वृद्धि, स्थानीय निकाय केन्द्रीय सरकारको भरपर्दो सहयोगी र जनताप्रति उत्तरदायी हुने प्रवृत्तिको विकास हुन थालेको थियो । त्यसबेला यी सबै काम निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले गराएका हुन् । यी सबै नयाँ पद्धति र प्रक्रियाको विकासले प्रमाणित गरिसकेको छ कि स्थानीय निकायमा सकेसम्म छिटो निर्वाचन गर्नुपर्छ र निर्वाचित प्रतिनिधिहरुलाई कार्य सञ्चालनको अभिभारा सुम्पनुपर्छ ।
अबको स्थानीय सरकार गठन गर्दा अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा मान्यता पाएका स्थानीय सरकारका आधारभूत चारित्रिक विशेषताहरुलाई ध्यान दिन जरुरी छ । ती हुन्- १. स्थानीय सरकार केन्द्रीय वा प्रान्तीय सरकारको प्रतिष्पर्धी होइन, सहयात्री हो, २. जनइच्छा नै स्थानीय सरकारले पाउने अधिकारको आधार हो, ३. सन्निकटताको सिद्धान्त भनेकै लोकतान्त्रिक मान्यता, जनचाहना र आकाङ्क्षालाई समेटेर सञ्चालन गर्ने पद्धति हो, ४. स्थानीय सरकारमा लैङ्गिक समानता र समावेशीकरण अनिवार्य हुन्छ, ५. व्यावसायिक तथा गैरसरकारी संस्थाहरु र नागरिक समाजको व्यापक संलग्नता हुनुपर्छ, ६. निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचनबाट प्रतिनिधि चुनिनुपर्छ र निर्वाचित प्रतिनिधिहरुमा प्रशासन चलाउन व्यावसायिक कुशलता हुनुपर्छ र ७. प्रत्येक निर्वाचित प्रतिनिधि तथा नियुक्त भएको कर्मचारीको काम, कर्तव्य र अधिकारको स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्छ र जनतालई दिने सेवाका लागि पर्याप्त स्रोत हुनुपर्छ । यी सात आधारभूत कुराहरुमा सम्झौता गर्ने वा सहमतिबाट कटौती गरे स्थानीय निकाय ऊँट बन्नेछ ।
हामीलाई विकासको आधारशिला बनाउन दशकौं लाग्छ, भत्काउन एकाध वर्षपर्याप्त हुन्छ । स्थानीय निकायहरु जनताका आशाका केन्द्र बन्दै गर्दा कुनै सन्काहा मन्त्रीले स्थानीय निकायहरुका प्रतिनिधिहरुको म्याद नथपेर वा अर्को निर्वाचन नगराएर बेवारिसे बनाइदिए । अहिले निर्णयकर्ताको आसनमा बसेका तीन ठूला दलहरु एमाओवादी, एमाले र काङ्ग्रेसले स्थानीय सरकारको स्वरुप के हुने भनेर आआफ्ना दलको स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् । अहिले जे छ त्यसमा सामान्य परिमार्जनबाहेक अर्को विकल्प देखिएको हो वा स्थानीय सरकारलाई महत्व नै नदिएको हो, दलहरुले त्यो स्पष्ट गर्नु जरुरी छ ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय निकायहरु आफूले प्राप्त गरेको जिम्मेवारी बहन गर्न सक्रिय बनून् भनेर ‘न्यूनतम शर्त र कार्यसम्पादनको मापन आधार’ बनाएर लागू गरेको छ । यो स्वागतयोग्य कदम हो । तर, कर्मचारीहरुको समय नपुग्दै र विनाआधार जथाभावी सरुवा गरेको, गाविस सचिवहरु र अरु स्थानीय कर्मचारीको सुरक्षाको कुनै प्रत्याभूति दिन नसकेको, सहभागितात्मक विकास प्रक्रियाभन्दा राजनीतिक दबाब र भनसुनका आयोजनाहरु कार्यक्रममा राख्ने गरेकाले आफूले बनाएको कार्यसम्पादनको मापन आधारमा मन्त्रालय आफै समस्या बनेकोतर्फ भने मनन गरेको पाइँदैन । स्थानीय स्तरमा न्यूनतम शर्त र कार्यसम्पादन मापन गर्ने आधार तोक्दा मन्त्रालयले पनि आफैले न्यूनतम केके कुरा अनिवार्य रुपले पालना गर्नुपर्ने हो, तोकेको भए वेश हुने थियो ।
यसबेला धेरै दातृनिकायहरु स्थानीय स्तरमा विकासका सहयात्री भएर पुगेका छन् । प्राकृतिक स्रोत ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, काठ, दाउरा, जडीबुटीको दोहन गर्न ठेकेदारहरु पुगेका छन् । ‘झोलामा खोला’ बोकेका विद्युत्का लाइसेन्सवालाहरु छयापछयाप्ती छन् । विनायोजना ‘प्लटिङ र हाउजिङ प्लान’ भन्दै दलालहरुले खेतीयोग्य जमीन हडपिरहेका छन् । पाकेको बाली लुट्ने र अर्काको जमीन हडप्नेहरु पनि छन् । पुलमुनि खोस्रेर बालुवा निकाल्ने, उर्वर माटोमा इँटाभट्टा थाप्नेदेखि चेलीबेटी बेच्नेहरु गाउँघरमा यत्रतत्र छन् । सानातिना अपराध र लेनदेनको मुद्दामा अदालत धाउनेको सङ्ख्या बढ्दो छ । कर्मचारी असुरक्षित छन् । सानातिना सिफारिश लिन पनि जनतालाई समस्या छ । बुद्धि र शीप देखाएर होइन, तागत र वर्कत देखाएर दबाबबाट काम लिनेको सङ्ख्या बढेको छ । यस्ता कुराहरुमा केन्द्रीय सरकार वा त्यसको संयन्त्रले ध्यान पुर्याउन सक्दैन । यसका लागि स्थानीय निकाय अपरिहार्य छ । सरकारले यसैपल्ट ४१ नयाँ नगरपालिका घोषणा गरेकाले शुरुदेखि नै जनप्रतिनिधिविहीन नगरपालिका सञ्चालन गर्दा यसको सन्देश कस्तो जाला, विचारणीय छ । त्यसकारण, नेपाल सरकार र दलहरुले स्थानीय निकायको निर्वाचन यथाशीघ्र गराएर तिनीहरुलाई अधिकार सुम्पेर काम गराउनुबाहेक अहिले कुनै विकल्प छैन ।